ေဗဒင္ – XB Media Myanmar
2021ခုနှစ် (10)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟာစာတမ်း (ဆရာမင်းသုခ)
October 2, 2021 Bestie_Author
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ ဒီလအတွင်း သူများကိစ္စကြားဝင်ကူညီခြင်း၊အာမခံခြင်း တွေကြောင့်အထူးဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ လင်မ ယားကြား မိတ်ဆွေတွေကြား ဘယ်သူ့ကြားမှမဝင်မိပါစေနဲ့။ ဘယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အခုကာလမှာ ရတာကနည်းနည်း ၊ပြဿ နာရှင်းရတာကများများဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတ နာများကျပျောက်ခြင်း သူခိုးခိုခံရခြင်းတွေကြုံနိုင်တယ်။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ စီးပွားတွက် တွက်နေတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်။ ချစ်သူကိုအချိန်ပေးဖို့ထက် ငွေနောက်ပဲလိုက်နေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ် မှာရန်ပေါ်နိုင်တဲ့ကာလပါ။ အလုပ်ရှာနေသူများ အလုပ်ရဖို့ဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းရင်းနှီးသူတွေနဲ့ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး သိပ်မညံ့ပေမဲ့ ပညာရေးကံကြမ္မာကတော့ အညံ့ဆုံးအနေအထားကို ရောက်နေတဲ့ ကာလပါပဲ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဘယ်သူကိုမှ မယုံသင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အထူးဟော = ကံညံ့နေသည်။ ယတြာ = သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက် မွေးနေ့နံနက်မှာ ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်နေလိမ့်မယ်။ အရာရာသတိထားဆောင်ရွက်ပါ။ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စများ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေရပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့နေရာသွားရခြင်း၊နယ်ပြောင်းခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အထက်လူကြီးက မိမိအပေါ်အမြင်မကြည်တာမျိုးတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ စိတ်အရမ်းညစ်ရတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်းစ ကား အခြေအတင်များရတတ်တယ်။ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ ကူညီမှုအများကြီးရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးလဲ အနည်းငယ်အားနည်းနေပါတယ်။ နေပူနည်းနည်းမိတာမျိုး၊ အိပ် ရေး ပျက်တာမျိုးကြုံတာနဲ့ ဖျားနာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခရီးထွက်ခြင်း၊ ကလေးတွေကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကံတွေပြန်မြင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အနေဝေးဖို့အကြောင်းဖန်လာလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအတွက်တော့ စိတ်အေးချမ်းရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ အထူးဟော…
သင့်အတွက်တင်သာမက သင့်နဲ့ ဆက်စပ်သူအားလုံးပါ အကျိုးရှိတဲ့ တစ်သက်စာ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ
August 22, 2021 Bestie_Author
သင်ရှဲလိုက်ရင် သင့်အတွက်တင်သာမက သင့်နဲ့ ဆက်စပ်သူအားလုံးပါ အကျိုးရှိတဲ့ တစ်သက်စာ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ သင်ရှဲလိုက်ရင် သင့်အတွက်တင်သာမက သင့်နဲ့ ဆက်စပ်သူအားလုံးပါ အကျိုးရှိတဲ့ တစ်သက်စာ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ “ လက်မ ကို နေ့တိုင်းနှိပ်ပေးပါ”လက်ချောင်းတိုင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အကြောတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကို စာဖတ်သူလည်း အသိဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ အကောင်းဆုံး တစ်နည်းကို ထုတ်ဖော်ပြောပြ လိုက်ပါမယ်။ အဲဒါကတော့ လက်မကို နေ့တိုင်းနှိပ်နယ်ပေးပါ။ အချိန်အားဖြင့်ကတော့ ၂ မိနစ် ၃ မိနစ်လောက် ဆိုရင်ကို အတော်လေး ထိရောက်ပါပြီ။ ၅ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက်အတွင်းမှာ သိသိသာသာ ပျော်ရွှင်တဲ့ စိတ်ခံစားမူကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ပူပင်သောက ရောက်နေတယ် ဆိုရင် ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းလေးကိုပြုလုပ်စေချင် ပါတယ်။ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ..ရှင် Credit ကျော်လင်းနိုင် [zawgyi] သင္ရွဲလိုက္ရင္ သင့္အတြက္တင္သာမက သင့္နဲ႔ ဆက္စပ္သူအားလုံးပါ အက်ိဳးရွိတဲ့ တစ္သက္စာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ သင္ရွဲလိုက္ရင္ သင့္အတြက္တင္သာမက သင့္နဲ႔ ဆက္စပ္သူအားလုံးပါ အက်ိဳးရွိတဲ့ တစ္သက္စာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ “ လက္မ…
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမ ကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ ဟောကိန်း….
August 15, 2021 Bestie_Author
မှဲ့တည်နေရာနှင့် အဟောတွေပါ… လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတတ်တာမို့ ကျား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးတာပါ) ဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေတာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့မပြောနိုင်သလို၊ အမှားတွေပါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ပါတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည်ပေါ့။ ကြိုက်လျှင်ယူ၊ မကြိုက်လျှင် ပယ်လိုက်ပါ။ယောကျ်ားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော…. ( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။ မိမိတွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာသည်ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ( ၂ ) ညာဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင်ရှိလျှင် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ လောကီစည်းစိမ်အဝဝကို သုံးဆောင် ခံစားရ တတ် သည်။ ( ၃ ) ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် အရက်သမား၊ ကြက်သမား၊ လောင်းကစားသမား ဖြစ်တတ်သည်။ လောင်းကစားမှုကို ဇနီးမယားထက်ပင် ပိုမို၍ ချစ်ချင်စွဲလမ်းနှစ်သက်ပါသည်။ ( ၄ ) နှာခေါင်းတည့်တည့် (နှာသီးထိပ်ဖျား)တွင် မှဲ့ရှိလျှင် စာပေ၊ ဇာတ်သဘင် တေးဂီတ အနုပညာရပ်များဖြင့် ထင်ရှား၍ အောင်မြင်ကျော်ကြား တတ်ပါသည်။ ( ၅ ) ညာဘက်မျက်ခမ်းအောက်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်သည်။ မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်၍…
ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက် အောင် မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ် မြန်မာပြည် ဟောစာတမ်း များ
July 31, 2021 Bestie_Author
ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက်အောင် မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ် မြန်မာပြည် ဟောစာတမ်းများ တိုင်းပြည်အနာဂါတ်အတွက် ဘောင်းဘီဝတ်တွေ လာလိမ့်မည်။ ဘုရားအဆူဆူမှာ စစ်ဖိနပ်သံတွေ ကြားရလိမ့်မည်။ရေစက်ခွက်ကိုင်လည်း ဘောင်းဘီဝတ်တွေပဲ။(၂၀၀၀)နှစ်ထောင်ခုနှစ်မှစ၍ မြတ်ဘုရား၏သာသနာကို သိကြားကူလို့ စောင့်ရှောက်မည်။ နဂါးတွေကို သာသနာကူဖို့သိကြားက တာဝန်ပေးလိုက်ပြီ။ကပ်ဆေးလိမ့်မည်။အမည်အသစ်နဲ့အနာရောဂါတွေ ပေါ်လာမယ်။ ကူးစက်မြန် သည့်ကာလဝမ်း အနာမျိုးလိုပဲ။ပိုးမွှားအနာပေါ့လေ။ ရေတွေကြီးမယ်။ မီးတွေလောင်မယ်။ မြေကမ္ဘာမှာမီးတောင်သေတွေ ပြန်ရှင်မယ်။ အစုလိုက်အပုံလိုက် သေကျေပျက်စီးမယ်။ အခွန်ဘဏ္ဍာတွေ ကြက်အစာကောက်သလို..ဇလုတ်မောက်အောင်ကောက် လိမ့်မည်။ချစ်တီး ခေါင်း လယ်ထွန်မယ်။ များများချမ်းသာချင်သူတွေ များများဒုက္ခရော က်မယ်။ ဂုမ္ဘဏ် ဘီလူးတပ်တွေ လူ့ပြည်ကိုဝင်စီးမယ်။ သဘာဝဘေး နဲ့အတူ စစ်ဘေးတွေ ပါလာလိမ့်မယ်။ တစ်ကျပ်မှာ တစ်မတ်ပဲ ကျန်မယ်။ အဖေကလည်း သားကို မကယ်နိုင် သားကလည်း အဖေကို မကယ်နိုင်။ခေတ်ဆိုးကာလဆိုးနဲ့ ကြုံလိမ့် မယ်။ ကပ်ကြီးသုံးပါး လာလိမ့်မယ်။ သရဏဂုံ တည်ကြ။ငါး ပါးသီလ မြဲကြ။ ခေတ်ဆိုးကြီးလာမယ်။ ဆိုးပြီးပျက်ပြီးမှ မင်းကောင်းမင်းမြတ် ထူးခြားစွာ ပေါ်မယ်။ မှီအောင်ကြိုးစားကြ မြန်မာတွေ စိတ်ရောကိုယ်ပါချမ်းသာပြီး သေသည့်လူတွေကို သတိတရ ရှိမယ်။ဒုတိယ အမေရိကန် ဖြစ်မယ် ။ တစ်ရာ့ တစ်ပါးလူမျိုးတွေ လာရောက်ပြီး ဉီးခိုက်လိမ့်မည်။သာသနာ အရောင်အဝါ…
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ သောကြာသားသမီးများ အကြောင်း
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ သောကြာသားသမီးများ အကြောင်း သင်ဟာ သောကြာနေ့မှာ မွေးဖွားသူ ဆိုရင် ဖတ်ကြည့်ပါ။ သောကြာနေ့ မွေးဖွားသူတွေဟာ အနုပညာဓါတ်ခံ ရှိသူများဖြစ်ပီး တီထွင် ဆန်း သစ် ဖန်တီးတတ် ကြတယ်။ အံ့သြဖွယ်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်း မျိုးတွေ ရှိတတ်ကြတာမို့ အလုပ်အကိုင် ရွေးချယ်ရင် အနုပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ ( ဥပမာ စာရေး ခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ဂီတ၊ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ စသည်) မှာ ပိုအောင်မြင်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း ပြီးမှသာ လိုရာခရီးကို ရောက်တာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်။ အလုပ် တစ်ခုခုကို စတင် လုပ် ကိုင်ဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပိုပီး သေချာစေချင်လို့ တွေဝေတာမျိုး မကြာခဏ ဖြစ်တတ်တယ်။ သူများတွေ အပေါ် သနားကြင်နာ တတ်ပြီး ကိုယ်ချင်းလည်း စာတတ်တယ်။သောကြာ သားသမီးတွေက အခြားနေ့သားတွေထက် ပိုပီး ခံစား လွယ် တတ်ကြတာမို့ သူတို့ကို စကားပြောရင် သတိထား ပြောရတယ်။ သူတို့ ပြောဆိုဆက်ဆံ လှုပ်ရှားမှုတွေက အခြားတွေကို သတိထားမိအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိကြတယ်။…
(၇)ရက် သားသမီးတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ချစ်စရာ အမူ အကျင့်များအကြောင်း
July 25, 2021 Bestie_Author
တနင်္ဂနွေ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1ရုပ်တည်ကြီး နေတတ်ပေမယ့်.. တကယ်ခင်သွားရင်လဲ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲမှာ မျက်နှာအပြောင်ဆုံးက သူပဲ အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ် ရတာမလို လိုတာမရတွေလေ.အစွဲလန်းလဲ ကြီးတယ် ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့ မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူး အချောကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိတယ် ညို့အား အပြင်းဆုံးက အသံ (အသံလေး ကြားဖူးရုံနဲ့တင် စွဲလန်းသွားစေတာမျိုး) တင်္နလာ အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. 1 တခုခုဆို အရမ်းပြတ်သားတယ် ပြောစရာရှိရင် ဘယ့်သူ့ကိုမှာ အားမနာတတ်ဘူးမှန်တဲ့ ဖက်က ရပ်တည်တာမျိုးပေါ့.. ရန်လိုတဲ့လူ နဲနဲများတယ် ဒါမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှ သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး ဘယ်လိုအခြေနေပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ် အပေါင်းသင်းဆိုလဲ ရွေးပြီးပဲ ပေါင်းတယ် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော သိပ်မထားတတ်ဘူး အတုယောင်တွေကို မုန်းလို့တဲ့လေ ညို့အားအပြင်းဆုံးက ခန္ဓာကိုယ် (ယောကျာ်းလေးဆို အရမ်းခန့်ပြီး မိန်းကလေးဆိုလဲ အချိုးအစားကျတယ်.. ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိတယ်) အင်္ဂါ ဆရာကြီး လုပ်တဲ့နေရာမှာ No.1 ပြောသာပြောတာနော် သြဇာက အရမ်းညောင်းတယ် လူချစ်လူခင်လဲ ပေါတယ် လူတိုင်းကလဲ ယုံကြည်တယ် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသတဲ့ သူတွေပေါ့ ဒါမယ့်…
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၈. ၇. ၂၁) မှ (၂၄. ၇. ၂၁) ရက်နေ့အထိ
July 19, 2021 Bestie_Author
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၈. ၇. ၂၁) မှ (၂၄. ၇. ၂၁) ရက်နေ့အထိ ခုနစ်ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာနှင့် ယတြာများကို အခမဲ့ ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ Sunday အချစ်ရေးမှာ အားပြိုင်မှုကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း သင့်မြတ်မှု မရှိပါ။ ကံကောင်းစေသော ဂဏန်း – ၁ ၃ ၄ Monday အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူ၏ မယုံသင်ကာ ဖြစ်မှုကို ခံရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး နားလည်မှု လွဲမှားနေလိမ့်မည်။ ကံကောင်းစေသော ဂဏန်း – ၄ ၅ ၉ Tuesday အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး သာယာပါသည်။ ကံကောင်းစေသော ဂဏန်း – ၄ ၅ ၆ Wednestday အချစ်ရေးမှာ စန်းပွင့်နေပါသည်။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ဗျာများလိမ်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။ ကံကောင်းစေသော ဂဏန်း – ၇ ၈ ဝ Thursday အချစ်ရေး ကံကောင်းပါသည်။ ချစ်သူဟောင်းနှင့် ပြန်တွေ့မည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။ ကံကောင်းစေသော…
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဇူလိုင်လတစ်လစာ ဟော စာမ်း
July 17, 2021 Bestie_Author
အရာရာတွင် စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ကာ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပီးဆောင်ရွက်လျင် အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ကောင်း များဖြင့် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်လျင်အကျိုးအမြတ်များစွာရမည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လူမှုဆက်ဆံရေးကြောင့် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများတိုးတက်လာကာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ လုပ် ကိုင် ရမည်။ စီးပွားလာဘ်လာဘကောင်းမည်။ကြွေးဟောင်းနှင့်မျှော်လင့်မထားသော ငွေများရရှိမည်။ တနင်္ဂနွေသားသမီး သောကြာသား သမီးများနှင့် အကျိုးတူလုပ်ငန်းများ အောင်မြင် မည်။ ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်မားမားနှင့် ပညာရေးကိစ္စများကြိုးစားပါက ထွန်းပေါက်အောင်မြင်မည်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ပြမ်လည်ဆုံစည်းရန်မရှိဟု ယူဆထားသူနှင်ဆုံစည်းရမည်။ လူမျိုးခြားနှင့် မေတ္တာရေးကြုံနိုင်မည်။ မိသားစုအိမ်ထောင်ရေးရာတွင် ကြည်နူးဖွယ်ကြုံရမည်။ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ကန်ထ ရိုက် လုပ် ငန်း၊အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့မှ အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိမည်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ဒူးနာ၊ခါးနာ၊အကြောအဆစ်ဝေဒနာ ခံစားရမည်။ဆေးကုသရမည်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်- အနီရောင်ဗျောင်မဝတ်ပါနှင့်။ ဘုရားမှာပန်းသီး၉ လုံးတင်လှူပူဇော်ပါ။
15.July.2021 မှ 21.July.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
July 15, 2021 Bestie_Author
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလမှာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ မိသားစုဝင်တွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရမဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်း အထက်လူကြီးတွေ ရဲ့ကူညီမစခြင်းကိုတော့ ရမဲ့ကာလပါ။တစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက်က အကူအညီပေးမဲ့ အချိန်ပါ။ အများနဲ့စုပေါင်းလုပ်ရသောအ လုပ်၊ အတူတကွတတ်ညီလက်ညီလုပ်ရသောကိစ္စရပ် တွေမှာ အောင်မြင် မှုရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဦးစီးဦးဆောင်ပြု၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ် တို့တွင် လည်းကောင်း၊ သူများဝန်ထမ်း နေရ သူတို့တွင်လည်းကောင်း ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အထူးကြိုးစားပြီး လုပ်နေရတတ်ပါ သည်။ ဒီကာလဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက် အကောင်း အဆိုးရောထွေးနေတဲ့အချိန်ပါ။ မိမိတွင် ချစ်သူရှိ နေသော်လည်း မိမိအား ချစ်ရေးဆိုသူတို့ ရှိနေတတ်ပါသည်။ ပူပင်မှုအန ည်းငယ် ရှိနေ တတ်သော်လည်း အချစ်ရေး ကောင်းမွန်နေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်မရှိလျှင် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး သင့်ပေမဲ့ ကြားလူတွေကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေ တတ် ပါသည်။ ကျန်းမာ ရေး ကတော့ အဖျားအနာရောဂါ၊ ခေါင်းအုံ၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အရေပြား ပေါ်၌ ယားနာများ၊ အရေပြားရော ဂါ၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ၊ မျက်စိမှုံခြင်းများ စသည်တို့ကို သတိထားသင့်ပါသည်။ အကျိုးပေးဂဏန်း -၈၊၅၊၄ အထူးဟော -ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ယတြာ…
2021ဇူလိုင် (၇)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ (၇)ရက် သား သမီး အထူးဟောစာတမ်း…
July 7, 2021 Bestie_Author
၂၀၂၁ ဇူလိုင်လအတွက် တစ်လစာအထူးဟောစာတမ်း မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပြောရရင်တော့ ကံကြမ္မာက အကောင်းဘက်မှာ အလေးသာနေပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင် ကိုင် အဆင်ပြေမယ့် အချိန်ပဲ ဆိုပါတော့။ ဒါကြောင့် သင် ပိုင်ဆိုင်သော အချိန်ကာလတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပေတော့။ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်စုံ အောင်မြင်မယ်။ တနင်္လာနံ ( ခြံ ၊ ကား ၊ အခန်းကိစ္စ ၊ ငွေကြေး) ဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ (ယဉ်၊ ရွှေ ၊ လူ ၊ အနုပညာ ၊ အလှပညာ) လုပ်ငန်းများနှင့် ပါတ် သက်၍ တိုက်ရိုက်၍သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်၍ စီးပွားရေး တိုးတက် အောင်မြင် မည်။ ဤကာတွင် သင်သည် မြတ်သော ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများနှင့် ဆုံတွေ့ ဖူးမြင်ရတတ်သည်။ အင်မတန် ကံထူးခြင်း ဖြစ်၏။ ရှင်သီဝလိ ပုံ တော်များ အလိုလို ဝင်ရောက်လာတတ်သည်။ နိမိတ်ကောင်းသည်။ အင်မတန် လာဘ်လာဘ ရွှင်မည့် အချိန်ကာလ ဖြစ်သောကြောင့်…
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ တော်လှန်သီတင်းကျွတ် ဆီးမီးသပိတ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ October 21, 2021
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေမှာ အ​ဖေနဲ့ အ​မေကို လက်စုံ မိုး အနီးကပ် ကန်​တော့ချင် တယ်ဆို ပြီး ဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ထားထက်ထက် October 21, 2021
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အလှူ အဖြစ် သက် ကြီးဘို းဘွားတွေကို အလှူပြုပေ းခဲ့တဲ့ ပရဟိတ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ပုံရိပ်မျာ October 21, 2021
လုံးဝမမှတ်မိတော့လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့ ဆုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ပရဟိ တ မင်းသားထွန်းကိုကို October 21, 2021
သကာရည်လာလောင်းလိုက်လို့ တော်လှန်ရေးမှာ ညောင်း သွားဖို့ ဘယ်တော့မှ မရှိဖူးလို့ စကစရဲ့ အနု ပ ညာ ရှင်တွေကို အပြစ်မယူတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကို တုန့် ပြန်လိုက်တဲ့ ဒေါင်း October 21, 2021